1)Wargayska Financial Times oo wax ka qoray shirka Eldoret
Eldoret,22nd Nov.2002 By BBC News
Wargeyska caanka ah ee Financial Times ee ka soo baxa magaalaa London, ayaa shalay (Talaado 20 November, 2002) maqaal dheer ka qoray shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya ee ka socda magaalada Eldoret ee dalka Kenya.
Weriyaha la yiraahdo Mark Turner oo ka tirsan wargeyska, ayaa waxaa uu maqaalkaasi kaga waramay sida uu shirku u socdo iyo dareenka ay beesha caalamku ka qabaan arrimaha Soomaaliya.
Wargeysku waxaa uu sheeggay in dadaalkii kan ka horeeyay uu ahaa wadahadaladii ay Soomaalidu majaraha u hayeen ee hoosta wax laga soo bilaabayay ee ka dhacay Djibouti, kaasoo ay ka soo baxday dawladda ku meel-gaadhka ah ee Qaran, taasoo ay dad badani ka rajo qabeen in ay noqon doonto xukuumadii ugu horaysay ee dhab ahaan dadka wakiil uga ah, balse sida uu wargeysku sheeggay si wayn taa loogu guul daraystay.
Dawaladaha reer Galbeedka, ayaa iyaguna arrinta iska fogeeyay, iyaga oo maanka ku haya guul daradii ay ku dhamaatay fara gelintii ay Qaramada Midoobay ku samaysay dalka Soomaaliya horaantii sagaashameeyadii, dawladii dhalatayna lama aqoonsanin, dalkuna sidii hore ayuun buu u kala qaybsan yahay.
Laakiin deblamaasiyiintu, waxaa ay ku adkaysanayaan in dalka Soomaaliya uu weli yahay meel walaac dhab ah laga qabo. Dalkaasi oo sida uu wargeysku sheeggay aanay wax sharci ahi ka jirin oo diintu ay bedeshay qaar badan oo ka mid ah hawlahii ay dawladdu qaban jirtay oo asal raacnimadu ay ka heli karto meel ay ku kacdoonto.
Qaramada Midoobay, ayaa sida uu qoray wargeyska The Times dhawaan ka digtay shirqoolada ay wadaadada mayalka adagi ay u qoolayaan hawlahoodda ay halkaasi ka wadaan.
Weriyaha u soo waramay wargeyska Financial Times, waxaa uu sheeggay in aanay muddo dheer kugu qaadanaynin marka aad gasho Hotel Sirikwa gudahiisa, halkaasi oo ay wadahadaladu ay ka socdaan in la ogaado caqabadaha hor taaggan sida uu wargeysku ku tilmaamay ee looga fadhiyo in hogaamiyayaasha dagaalka ee Soomaaliya ay iyagu xal ka gaaraan.
Waxaa hoolka wayn ee halkaasi ku yaalla ka socda wada xaajoodyo aan kala go' lahayn, aad ayuuna kulankaasi u jiitamayaa iyadoo wax sidaa u wayn aan la isku haynin.
Waxaa uu wargeysku sheeggay in ay laba iyo labaatanka kooxood oo halkaasi ku shiraya ay sadex maalmood ku qaadatay in ay go'aan ka gaaraan sadexda kalmadood. Iyadoo ay wadahadalada ay bil marayaan hadda, ayaa wargeyska Financial Times, waxaa uu sheegay in weli la isku mari la'yahay tirada dadka ee ay koox waliba qaadanayso ee ka qayb galaya guddiyada la sameeyay kadib markii tiradaasi sadex laabkeed ay halkaasi tagtay.
Hogaamiyayaasha kooxaha, ayaa wargeysku waxaa uu sheeggay in ay iyaga laftoodu ay qiranayaan dhibaatooyinka hor yaalla. Financial Times waxaa uu qoray in mar Shaati Guduud la waydiiyay in ay halkaasi ka jirto baahi dhab ah oo nabadda loo qabaa iyo in wax la isku hayaa uu yahay uun faa'iidada shaqsiyaadku ay helayaan, ayaa shaati guduud inta uu qadar yara aamusay waxaa uu yiri in ay arrintu tahay ta dambe labada ee ah in la isku hayo faa'iidada shaqsiyaadku ay helayaan.
Waxaana sida uu wargeyska Financial Times qoray fikradaasi isaguna qaba Ra'iisal Wasaaraha dowladda ku meel-gaadhka ah ee Soomaaliya Xassam Abshir Farah oo sheeggay in haddii aanay beesha caalamku culaays ku filan saarin kooxaha in aanay markaasi ku qanci doonin in ay faraha uga qaadaan waxyaabaha dheeraadka ah ee ay haystaan.
Wargeysku, waxaa uu intaasi ku daray in intii ka dambaysay bishii septambar 11keedii ay reer galbeedku haystaan kaar ay ciyaari karaan, kaasoo ah in Soomaalida ay ku qufulan tahay in Maraykanku ay weerari doonaan haddii aan xal la gaarin.
Wargeyska Financial Times, waxaa uu sheeggay oo kale in Elijah Mwangala oo ah ninka u dhashay dalka Kenya ee wadahadaladaasi gudoominaya uu yiri, "arintu waa mid la isku larayo ciqaab iyo abaal marin, isaga oo sida muuqata ula jeedda waxa ay la kulmi doonaan dhinacyada ogolaadda heshiiska iyo kuwa loo arko in ay is hor taagayaan in heshiis la gaar, waxaana sida wargeysku uu qoray uu yiri "u malayn maayo in aan anigu xaq u leeyahay inaan sheego waxa aanu samayn doono, laakiin wax waanu samayn doonaa".
2)Midowga Africa oo ergay u magacaabay Somalia
Eldoret,22ka Nov.2002-Lanta Af Soomaaliga ee bbc-da
Ururka Midowga Europe, ayaa u magacaabay deblomaasi u dhashay dalka Tanzania inuu noqdo ergayga gaarka ah ee ururkaasi u qaabilsan Somalia si loo taageero wadahadalada nabadda ee looga gol leeyahay in lagu soo afjaro khilaafka toban sano jirsaday ee ka jiray dalka Soomaaliya.
Ururka Midowga Africa, oo badalay Ururkii midnimada Africa ee OAU bishii July, ayaa sheegay in Maxamed Cadli Faum uu magaalada Eldoret ee dalka kenya u hogaamin doono wafdi ka socda ururka Midnimada Africa, halkaasi oo uu ka socdo shirka looga hadlayo nabadda Soomaaliya, waxaana dhexdhexaadinaya Urur goboleedka IGAD. Foum, wuxuu horay u soo qabtay xilal ay ka mid yihiin wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda 1976-dii ilaa 1980-kii, wuxuuna noqday safiirka Tanzania u fadhiya dalalka Talyaaniga, Congo, Masar iyo India.
Shirka Eldoret ee looga gol leeyahay in lagu soo dhiso dowlad rasmi ah oo Soomaaliyeed iyo dhaqaalha curyaamay ee dalka, ayaa socday ilaa 15-kii October, iyadoo dowladda ku meelgaarka ah iyo kooxaha hubaysan ee Soomaaliya ay isla ogolaadeen xabadjoojin 31-kii October.
3)C/laahi Yusuf oo ku laabtay Puntland
Gaalkacyo,22ka Nov.2002-By bbc news room
Wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee Maamul Goboleedka Puntland, ayaa sheegaya in maanta halkaas uu tagay Cabdullahi Yuusuf ah, madaxwaynaha dowlad goboleedka.
Cabdullahi Yuusuf, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirkii Soomaalida uga socday magaalada Eldoret ee dalka Kenya.
Ilaa iyo hadda ma cadda sababata uu Cabdullahi Yuusuf shirka uga soo tagay, hase yeeshee, waxaa wararka qaar ay sheegayaan in Puntland uu dib ugu laabtay si uu u xaliyo xiisado ka taagan oo ay qaarkood dhaceen intii uu shirka ku maqnaa